SV: Shantan shardi ayaan Ap ku xireynaa, si aan u wada shaqeyno - NorSom News
SV: Shantan shardi ayaan Ap ku xireynaa, si aan u wada shaqeyno
Xisbiga SV oo kamid ah xisbiyada garabka bidix ee siyaasada dalkan Norway ayaa sheegay inay xisbiga Ap ay ku xiri doonaan shan shardi, kuwaas oo hadii aan la fulin aysan jiri doonin wax wada shaqeyn ah oo dhexmarti doonto Ap iyo SV.
Barnaamijka ay SV sanadkan ku galayaan doorashada, waxaa kamid ah in hoos loo dhigo saboolnimada caruurta Norway kunool, waxeyna sheegeen inay rabaan in kor loo qaado lacagta la siiyo waalidiinta dhalay caruurta ka yar da´da 18-ka sano(barnetryd).
Shantan qodob oo ay SV Ap hordhigeen ayaa kala ah:
In la kordhiyo lacagta la siiyo waalidiinta dhaley caruurta ay da´doodu ka yartahay 18-ka sano-
In lala dagaalamo waxyaabaha keena inay cimiladu isbadasho, isla markaana la yareeyo gaasaska hawada lagu sii daayo, sida CO2.
In la taageero heshiis caalami ah oo looga hortagayo hubka wax gumaada ee Nugleyrka.
In la kordhiyo tirada macalimiinta iskuulada.
Iyo In la istaajiyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee lacagta ka faa´iido howlaha daryeelka dadweynaha oo ay dowlada u qabtaan.
SV ayaa rabo inay doorashadan la shaqeeyaan Ap iyo Sp, laakiin waxaa dhici karto inaysan dowlada kamid noqon, hadii ay wada shaqeeyaan Ap, KRF iyo Sp.
Previous articleWasiirada soo galootiga Sweden oo diiday inay la kulanto Lishaug
Next articleMidowga Yurub oo xeryo qaxooti oo ka sameynaya dalalka Niger iyo Chad
Doorashada 2017 Norway
Abid Raja oo ay u badantahay in wasiirka cadaalada laga dhigo, hadi Venstre ay kamid noqdaan xukuumada Solberg
Venstre oo qiimeynaya inay xukuumad kala mid noqdaan FRP.
Dhageyso: Idaacada VOA oo warbixin ka diyaarisay natiijada doorashada Norway